Maqal : Garowe Oo Looga diyaar Garoobayo Munaasibadda Ciida – SBC
Maqal : Garowe Oo Looga diyaar Garoobayo Munaasibadda Ciida
Posted by SBC Editor on June 20, 2017 Comments
Dhaq-dhaqaaq xaga ganacsiga ah ayaa laga dareemayaa suuqyada ku yaala degaanada Puntland xili shacabka halkaasi ku dhaqan ay isu diyaarinayaan Xuska iyo Dabaal dega Munsaasabada Ciidul Fidriga.
Howlahan dhaq-dhaqaaqa Ganacsiga ayaa xiligan si weyn Looga dareemayaa Suuqyada Waa weyn ee ku yaala Magaalooyinka Puntland,iyadoo xawliga waxyaabaha ciida si weyn loo iibsanayo.
Magaalada Garowe ee Caasimada Puntland waxay ka mid ah meelaha ay xiligan ka jiraan dhaq-dhaqaaqyada xaga ganacsiga ah iyo kale iibsiga waxyaabaha Lagama Maar maanka u ah Dabaal dega Maalinta Ciidul Fidriga ee Naga soo beegan dhawaan.
Waxyaabaha sida weyn ay iibsanayaan qeybaha kale duwan ee shacabka ku dhaqan guud ahaan degaanada Puntland ayaa waxaa ka mid ah,Dharka iyo Alaabaha kale ee ay Carruurta Ciida ugu talagalleen.
Shacabka qeybihiisa kale duwan ee ku dhaqan Magaalada Garowe iyo Daafaheeda ayaa suuqayada Magaalada usoo dukaameysi tagay si ay Carruurtooda ugu iibiyaan waxyaabaha ay uga qeybqaadanayaan dabaal dega Munaasabada Maalinta Ciidul Fidriga.
Mid ka mid ah goobaha ugu Mashquulka badan xiligan suuqyada Magaalada Garowe ayaa waxaa lagu soo Kordhiyay goobo ganacsiga dheeraad ah oo wadooyinka Laamiga ah si loogu iibiyo dharka iyo Alaabaha Carruurta ay ku ciidaan.
Hase yeeshee Tan iyo burkii dowladii dhexwe ee dalka Soomaalia waxaa jiray dad yow kale duwan oo yimid degaanada Koonfurta iyo Bartamaha dalka Soomaalia kuwaasi oo tan iyo waqtigaasi ganacsi kale duwan ka sameystay degaanada Puntland si ay Noloshooda usoo saartaan.
Maahan Markii uigu horeysay ee sidan oo kale qaar ka mid ah Suuqyada waa weyn ee degaanada Puntland looga Dareemo diyaar garowga xoogan ee ku aadan dabaal dega xuska Maalinta ciidul fidriga ee Nagu so beegan.
Hase ahaatee waxaa jira in ay qaar ka mid ah goobaha ay degan yihiin dadka Barakacayaasha ka yimid degaanada Koonfurta Soomaalia ee ku nool xerooyinka Magaalada Garowe laga dareemeyn u diyaar Garowga iyo weyneynta xuska Maalinta ciidul Fidriga ee fooda Nagu soo heyso.